Vatsvagiri veChinese vakagadzira robhoti robhoti raizobvumidza kudyidzana kweeuroni nemakomputa | Linux Vakapindwa muropa
Chinese vaongorori vakagadzira robhoti robhoti raizobvumira kudyidzana kweeuroni nemakomputa
Chikwata chevaongorori muSenzhen, China, chakagadzira robhoti iyo yaigona kupinda mumuviri wemunhu uye kufamba pamwe nemidziyo yeropa uye kubatanidza kune mauroni. Sekureva kwenhevedzano yemavhidhiyo akaburitswa neboka rekutsvagurudza pamwe chete neongororo mumagazini yesainzi Advanced Functional Materials kutanga kwemwedzi uno, akangwara mudiki robhoti worm qvakadaidza iRobot, inogona kusvetukira pamusoro poruzhowa, kushambira mutepu, kana kupenyerera muchikamu hafu yeupamhi.
Sekureva kweshumo, iyo mycorobot 1mm ne3mm haishande nemachipisi kana mabhatiri, asi neinze magnetic field jenareta. Masayendisiti aya akavakira zvisikwa zvavo pachimiro chekare chemashiripiti kubva kumaodzanyemba kweChina, anozivikanwa sa "Gu," chidiki chine chepfu-chakaita kunge honye chinogona kukurirwa muhari uye kushandiswa kudzora pfungwa dzemunhu.
Xu Tiantian, musayendisiti anotarisira chirongwa ichi paShenzhen Institute of Advanced Technology kuChina Academy yeSainzi, akati:
"Neimwe nzira, akafanana naGu." “Asi chinangwa chedu hachisi chekugadzira chombo choutachiona. Zvakapesana "
Nadzurudzo yemagineti minda jenareta wekunze inobvumira vaongorori kumonyanisa muviri werobhoti nenzira dzakasiyana uye uwane akasiyana mafambiro.
Sekureva kweshumo, marobhoti aya anokwanisa zvakare kunverera nepakati vachishandisa infrared radiation kuti vabate miviri yavo neanopfuura chetatu.
Muviri wehonye wakagadzirwa nehydrogel yakajeka tembiricha inononoka iyo zvakare inokupa iwe kugona kushandura ruvara munzvimbo dzakasiyana. Vhidhiyo inoratidza kuti kana robhoti irikunyudzwa mukapu yemvura patembiricha yemukati uye rinova rinenge risingaonekwe.
Chinese makonye emarobhoti zvakare ane "musoro" wakagadzirwa nemagineti akagadzirwa neodymium-iron-boron alloy uye "muswe" wakagadzirwa neakakosha composite zvinhu.
Xu Tiantian anotenda kuti iwo achanyanya kubatsira vanachiremba mune ramangwana, semuenzaniso, nekubayiwa jekiseni mumuviri uye kuendesa pasuru yemishonga kune imwe nharaunda, senge bundu.
Izvi zvinogona kudzikisira kushanda kwechinodhaka kunzvimbo dzainodiwa uye kudzora njodzi yemhedzisiro, uye honye ye robotic inogona kubva mumuviri kana basa rayo rapera.
Parizvino, uropi unodyara inogona kuiswa chete kuburikidza nekuvhiya uye kuve nekwaniso inokwana yekubatanidza neuroni, zvinoreva kuti vanokwanisa chete kuita mashoma mashoma mashoma mabasa.
Asi marobhoti madiki nyowani anogona kuiswa muhuropi, nekuti kufamba kwavo kukuru uye kugona kwavo kushandura kunovatendera kuti vararame munzvimbo ino yakaoma umo kuyerera kweropa kuchikurumidza uye tsinga dzeropa dziri diki.
Xu Tiantian akadaro inogona "kushanda seyakaisirwa yeuropi-komputa interface" izvo zvaizobvumidza kutaurirana kwakananga nekombuta pasina kudiwa kwekhibhodi kana kunyangwe skrini.
Maererano neshumo, muongorori anotenda kuti zvaizoshanda nekupfeka chinofambisa chaizoshandura masaini zvekunze mukati mekupomba kwemagetsi uye zvaizobatana nemaseru ehuropi kusimudzira zviitiko zvisingaite netekinoroji yazvino.
Munguva yekuita, murwere anofanirwa kurara pasi pamuchina weMRI-mhando inogadzira iyo magnetic field inodiwa kudzora marobhoti.
Xu Tiantian anoti:
Tekinoroji nyowani inogona kushandiswa zvisirizvo nekuishandura kuita chombo. Zvisinei, muongorori akati pakanga pachine zvipingamupinyi zvakakosha mukushanda kwayo.
Muchokwadi, kuti iko kushandiswa zvisirizvo kweiyi tekinoroji kuitwe, ine simba magetsi magetsi jenareta ane yakareba inoshanda renji ingafanira kuti ivakwe kuti ishandise iyo honye marobhoti.
Zvakare, zvingave zvakare zvakanyanya kuomesa kuendesa ma microbots kunzvimbo yavo yakatarwa pasina kubatana kwemunhu wavari, sezvo vachifanira kugara kana kurara pasi voramba vakanyarara panguva iyo marobhoti achifamba pamuviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chinese vaongorori vakagadzira robhoti robhoti raizobvumira kudyidzana kweeuroni nemakomputa
Firefox Izwi, chirongwa chitsva cheMozilla chekubata Firefox nemirairo yeZwi
LibreOffice 7 inopinda chikamu chekuvandudza, nerutsigiro rweVulkan neSkia